आज नाग पञ्चमि, घरको मूलढोकामा नागको चित्र टाँसी पूजाअर्चना गरी मनाइदैं - अभियान खबर
आज नाग पञ्चमि, घरको मूलढोकामा नागको चित्र टाँसी पूजाअर्चना गरी मनाइदैं
आज श्रावण शुक्ल पञ्चमि, आज हिन्दुहरूले आ-आफ्नो घरको मूलढोकामा नागको चित्र टाँसी पूजाअर्चना गरी पञ्चमि पर्व मनाउँदैछन्। पानी र वर्षाका देवता मानिन्छ।
जुन घरमा नागको वास हुन्छ त्यहाँ लक्ष्मीको वास हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वासका साथ नागपूजा गरिने प्रचलन रहेको छ।नागपूजाको प्रचलन वैदिक काल अघिदेखि चल्दैआएको विश्वास गरिन्छ । नागपूजा विशेषतः षष्ठीयुक्त पञ्चमी तिथि अर्थात (षष्ठी तिथिलाई छोएको पञ्चमीका दिन)गर्नाले नागदेवता खुसी हुने र उदय पञ्चमी तिथिमा नै नागपूजा गर्ने परम्परासमेत रहिआएको बताइन्छ।
आजको दिन घरका ढोकामा शेषनागमा शयन गरेका भगवान्को चित्र टाँसी पूजा गर्नाले वज्र, चट्याङ र आगलागीका साथै सर्प, बिच्छीको भय नहुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। धार्मिक ग्रन्थहरू गरुण पुराण, स्कन्दपुराण, नारदपुराण, भविष्यपुराण र वराहपुराणमा नागको पूजा, अर्चनाबारेमा उल्लेख भएको पाइन्छ। वैदिक लगायत बौद्ध र जैन धर्मावलम्बीले पनि नागपूजा गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ। नागको पुजा गर्दा दुबो, दूध, अक्षता आदि चढाई धूपधुवाँ गर्ने तथा आफ्ना कुलनागका थानहरूमा पनि विशेष रूपमा पूजा गरी खीर, रोटीलगायतका प्रसाद चढाउने गरिन्छ।
नागपञ्चमीका दिन बिहान सबेरै पुरोहितद्धारा घरको मूलद्वारमा नागको चित्र टाँसी पूजा गरेपछि गृहस्थीले क्रमशः नागपूजा गर्ने परम्परा रहेको छ।नागलाई विष्णु र शिवका रुपमा मान्ने प्रचलन वैदिक सनातन कालदेखि नै चलिआएको छ। शिवले नागको माला लगाउने र विष्णु जलमाथि शेष नागको शय्यामा फणाको छाता ओढी शयन गर्ने भएकाले दुवै भगवान्लाई नागका रुपमा मान्ने
आज मिति २०७६ जेठ १ गते बुधबारको रासिफल
Posted on May 15, 2019 Author Nirajan Abhiyaan
मेष आज व्यवसायबाट सोचेको लाभ मिल्नेछ । नयाँ काम र जिम्मेवारी मिल्ने समय छ ।विद्यामा प्रगति हुनेछ । अरूको मन जित्न सकिनेछ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउनेबेला छ । पुराना साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने मौका छ । आज १ शुभ अंक रहेको छ । बृष आज शत्रुपक्ष विस्थापित होलान् । अधुरा काम बन्ने समय छ । शरीरमा आरोग्य र स्फूर्तिबढ्नेछ । प्रशस्त धन लाभ हुनेछ । प्रेमको बन्धन कसिनेछ । चिताएको कुरा प्राप्त हुनेछ ।नयाँ काम थालनी होला । आज ७ शुभ अंक रहेको छ । मिथुन आज प्रियजनसँग भेटघाट हुनेछ । विभिन्न उपहार समेत पाइएला । खानपान समारोहमासहभागी भइएला । प्रेम र मित्रताको गाँठो कसिनेछ । प्रयास गर्दा बोलीकै भरमा कामबन्नेछन् । आम्दानी प्रशस्तै हुनेछ । आज ९ शुभ अंक रहेको छ । कर्कट आज परिवारजनसँग आत्मीयता बढ्नेछ । गुरुजनको साथ मिल्नेछ । पढाइलेखाइमाप्रगति हुनेछ । व्यापार९व्यवसायमा राम्रै फाइदा हुनेछ । सन्तान वा अनुयायीकामाध्यमबाट विशेष फाइदा होला । आर्थिक पक्ष सबल बन्नेछ । आज ६ शुभ अंक रहेको छ । सिंह आज विचारले धेरैलाई प्रभाव पार्न सकिनेछ । मानसम्मान पाइनेछ । आत्मबल बढ्नेछ ।व्यवसायबाट प्रशस्त फाइदा उठाउने मौका छ । प्रतिस्पर्धीहरूले हार खालान् । सन्तान वाअनुयायीका माध्यमबाट विशेष फाइदा हुने छ । आज १ शुभ अंक रहेको छ । कन्या आज समय अलि कमजोर देखिन्छ । काममा बाधा र खर्चको मात्रा बढ्ने समय छ ।स्थानान्तरण र टाढाको यात्रा सम्भावना छ । विश्वासघातमा परिने र काममा धोका पाइनेसम्भावना देखिन्छ । हात लागिसकेको कामसमेत फुत्कन सक्छ । आज ५ शुभ अंक रहेकोछ । तुला आज रोकिएका कामहरू सम्पादन गर्ने समय आएको छ । व्यावसायिक काममा लाभ होला। सहयोगीहरूबाट अलि धोका पाइने समय छ । रमाइलो भ्रमण सम्भावना छ ।अरूलाईप्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ । आज ४ शुभ अंक रहेको छ । बृश्चिक आज शरीरमा आरोग्य एवं स्फूर्ति बढ्नेछ । विशिष्ट व्यक्तित्वसँग भेटघाट गर्ने अवसरजुट्ला । वस्त्र पुरस्कार लाभ होलान् । बोलीको प्रभाव बढ्नेछ । धेरैले तपाईंको प्रशंसागर्नेछन् । विभिन्न उपहार पाइने समय छ । आज ३ शुभ अंक रहेको छ । धनु आज बौद्धिक प्रभाव बढ्नेछ । आफन्तजनको सहयोगले विशेष फाइदा होला । मुद्दामामिलार प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ । प्रियमिलन हुनुका साथै प्रेम र मित्रताको गाँठो कसिनेछ । प्रशस्त धन लाभ हुनेछ । चिताएको कुरा प्राप्त हुनेछ । आज २ शुभ अंक रहेको छ । मकर आज प्रतिस्पर्धी र शत्रुपक्षबाट जोगिएर काम गर्नुपर्ने समय छ । साथ साथै घरायसीसमस्या बढ्ने छ । पढाइमा बाधा काममा अवरोध र आफन्तसँग मनमोटाव बढ्ने छ । विद्यामा प्रगति हुनेछ । वैदेशिक क्षेत्र लाभदायक रहला । आज ८ शुभ अंक रहेको छ । कुम्भ आज शिक्षा र बौद्धिक क्षेत्रमा उन्नति हुनेछ । काम गरेर अरूलाई प्रभावमा पार्न सकिनेछ ।पढाइलेखाइमा उन्नति हुनेछ । तपाईंको प्रतिभाको धेरैले कदर गर्नेछन् । शत्रुबाधा समाप्तहुने छ । प्रशस्त धन लाभ हुनेछ । आज ७ शुभ अंक रहेको छ । मीन आज नयाँ काम र जिम्मेवारी मिल्ने समय छ । धार्मिक, सामाजिक तथा परोपकारजन्यक्रियाकलापमा मन जानेछ । रमाइलो भ्रमण सम्भावना छ । अरूलाई प्रभावित पारेर कामबनाउने समय छ । व्यवसायबाट सोचेको लाभ मिल्नेछ । आज २ शुभ अंक रहेको छ ।
Posted on May 27, 2019 Author Nirajan Abhiyaan
आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई राज्यले छानीछानी पक्राउ गरेको भन्दै प्रतिवन्धित बिप्लव समूहका कार्यकर्ताले राजधानीलाई आतंकित बनाउन थालेका छन । आईतबार उनीहरुले बिभिन्न ठाउंमा बिष्फोट मात्र गराएनन् जनजीवन आतंकित बनाउन ठाउं ठाउंमा बम समेत राखे । हरीले बलम्वु, ललितपुरको ग्वार्खो र लगनखेलमा समेत शंकास्पद बस्तु फेला पारेको छ । ती शंकास्पद बस्तुलाई नेपाली सेनाको बम डिस्पोज […]
तपाईको जन्मिएको महिना कुन हो ? हेर्नुहोस् यी महिनामा जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् अर्बपति !
Posted on June 21, 2019 Author abhiyaan
एजेन्सी । ग्रह, नक्षत्र, बार, तिथिहरुको आधारमा मानिसहरुको भविष्यको फल बनाइन्छ । यसमा महिनाको पनि निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । १. बैशाख बैशाख महिनामा उत्पन्न हुने मानिस भोगी (सर्वसुखयुक्त), धनवान, राम्रो चित्त र बिचार भएका, क्रोधवान, सुन्दर आँखा भएका, रुपवान, स्त्रीहरुलाई माया गर्ने स्वभावका हुन्छन् । २. जेठ जेठ महिनामा जन्मिएका मानिसहरु विदेशमा बस्ने, […]
नेप्सेसँग रसुवागढी र सान्जेन हाइड्रोपावरको आज आइपीओ सूचीकरण सम्झौता हुँदै
पौडेल र सिटौलाले गरे कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार
रंगशालामा प्रहरीले पत्रकार कुटेपछि महासंघको आपत्ति